Andalusia, owona mmandla uhlwempuzekileyo eSpain naseYurophu | Ezezimali
UJose Manuel Vargas obambe umfanekiso | | Izaziso
Amanani athetha yonke into kwaye ayagqibeka. Ngokwengxelo «Intlupheko 3.0. Inkqubela Yentlupheko », Andalusia iye ummandla ohlwempuzekileyo eYurophu (ngo-2010 kwabekwa kwindawo yesihlanu). Ngaphezulu kwe-40% yabemi base-Andalusi bahlala kwisangqa sendlala, okanye yintoni enye, abantu abazizigidi ezithathu ezinesiqingatha. Kwaye uRhulumente uyaqhubeka nokuthetha ngokuvuseleleka okungaqhelekanga kuqoqosho ...
I-Andalusia ine I-35,8% yenqanaba lokungaphangeli, nto leyo ebangela ukuba amalungelo abemi bayo ehle kakhulu kule minyaka idlulileyo. Amawaka amawaka namawaka abantu abafumanisa kungenakwenzeka kungekuphela nje ukuba baphile (abo bahlawulisa ngokwenkolo) kodwa nokuqhubela phambili. Kukho ukungakwazi okukhulu ukuhlangabezana neenkcitho ezingalindelekanga kunye ne umahluko phakathi kwezityebi namahlwempu iya isiba nkulu kakhulu (sele iyi-7%, amanqaku amabini angaphezulu kowama-2010).
Kula manani kufuneka sidibanise ezo, ngenxa yeentloni okanye ukubulela ngoncedo lweentsapho, ezingabonakali kwiirejista zabantu abahluphekileyo. Oku kuyakwenza ukuba inani lingaphezulu ligazi kunokuba linjalo. Ke, njengoko abasemagunyeni abaphezulu besixelela, ngaba sibuyela kwimeko yoqoqosho? Singathetha ngoku ngokubanzi ngokujonga ezi ziphumo, akunjalo?
Intlupheko eqhubela phambili kwaye, ngokokulindeleka okukhulu, iya kuqhubeka ukwenza njalo okoko oorhulumente beqhubeka ukubeka iimarike phambi kwabantu. Ngaphandle kokuya phambili, uHlahlo lwabiwo-mali Jikelele luka-2014 lucinga nge-36% yokwehla kwento yeeNkonzo zeNtlalontle kunye ne-39% yokunyuka kwezomkhosi. Into ethi, xa ibona okwenzekileyo kungekuphela eAndalusia kodwa kuyo yonke iSpain, ayilunganga kwaphela.
Kakhulu kangangokuba iidolophu eziphambili zeAndalusia, iSeville, iMalaga, iGranada, iHuelva, iCádiz kunye neJerez de la Frontera zidibanise ukugxila kunye neziganeko kumsitho Usuku lweHlabathi lokuphelisa ubuhlwempu. Ezi mfuno ziya kubhekiswa kurhulumente ophakathi naseJunta de Andalucía ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali oluxhasa imigaqo-nkqubo yezentlalo kunye nokulwa indlala nokungalingani.
Ngenxa yale panorama, ayothusi into yokuba iAndalusia imatshe kwindlela ye ukubhengezwa kwezentlalo. I-12% yabemi baseAndalusian banolibaziseko ekuhlawuleni amatyala anje ngombane, amanzi okanye ubambiso, amanqaku amathathu ngaphezulu komndilili wesizwe. Ngokunjalo, i-66% yabantwana besikolo abanakho ukufikelela kuzo naziphi na izibonelelo zemfundo ezinje ngeencwadi zesikhokelo, iikhompyuter okanye iikhalityhuleyitha… 66% !!!…
Ndisayikhumbula loo motto kaChaves noGriñán, ababesakuba ngoomongameli beBhodi, abathi into efana ne "Andalpia Andalusia" ...
Umfanekiso - Amakhoboka e-SAS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Izaziso » I-Andalusia, owona mmandla uhlwempuzekileyo eYurophu
Yinto ekufuneka ilawulwe iminyaka engaka yiPSOE ... Njengakwi-ZP, ukuchitha izixhobo kubaphathiswa bezokulingana, njl. ... I-curraaaarrrrrrrr
Kutheni le nto u-Andalusia eyinkululeko kunye nentswela-ngqesho kunye nokubuyela umva kwezemfundo kuyo yonke iSpain?
Eli nqaku linengxaki yokungabikho kobungqongqo. Intlupheko iyanda eAndalusia kwaye nangona ebonakala egxeka urhulumente waseAndalusi, usola urhulumente ophambili ngayo.
Ukuba ngqongqo kwindlela kwaye sikwazi ukuvuma okanye ukukhanyela iziphumo, kubalulekile ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kulo lonke elaseSpain. Ukuba ilandela imeko efanayo ne-Andalusia, isiphoso silele kurhulumente ophakathi, kodwa ukuba kulo lonke elaseSpain indlala iyancipha kwaye apha iyakhula, ke ityala liphantsi korhulumente waseAndalusi.
NguYesu Romero sitsho
LEE ESPAÑOL- ANTENA 3 KUNYE NAMERICA CNN
Phendula kuYesu Romero
Omnye phaya sitsho
I-Andalusia nguloo mmandla ngqo apho iimarike zibalulekile kwaye inkxaso-mali ibaluleke ngakumbi. Uthini umbhali weli nqaku? Ngaba ungayilungisa ngeemarike ezingaphantsi kunye neenkxaso-mali nangakumbi? Kutheni le nto kufuneka sinyamezele abantu mihla le abazi kuphela ukusombulula iingxaki ngokuthukisa inyathelo labucala kunye nokucela abezopolitiko?
Phendula ku Omnye phaya
UPaul bouvier sitsho
Ukubuyiselwa okungaqhelekanga koqoqosho? Ngokwazi kwam sikwilizwe apho ityala loluntu lidlula i-GDP ...
Phendula Pablo Bouvier
Ngapha koko, andazi yonke idatha kodwa kukho ezinye ezixokayo. I-66% yabafundi baseAndalusi, ithi inqaku, abanakho ukufikelela nakweyiphi na imfundo. Ingxaki kukuba iJunta de Andalucía ibonelela ngeencwadi zezifundo kwi-100% yabafundi, ke andazi ukuba ndingalixhasa njani ibango. Kwaye malunga ne-40% yabantu base-Andalusi abahlala kwisangqa sentlupheko, ewe, ndinokuba ndiphosakele, kodwa andinawo uvakalelo lokuba nayo iyinyani. Ndifundisa kwiziko kwaye ndiyabazi ubunyani bentlalo yabantwana abaninzi kwaye andiyiboni imeko efana nale ibonakalisiweyo, nangona kusenokwenzeka ukuba bendizikhohlisa.
Idatha iyafuneka ukwenza i-invoyisi